Ngo-2050, ukucindezela kokushisa kuzothinta abantu abengeziwe abayizigidi ezingama-350 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngo-2050, ukucindezela kokushisa kuzothinta abantu abengeziwe abayizigidi ezingama-350
Umzimba womuntu uyakwazi ukuzivumelanisa nezimo: ngokuhamba kwesikhathi, ungavumelana noma ngabe usendaweni ebanda kakhulu noma esendaweni efudumele kakhulu. Ngenxa yalokhu, sikwazile ukwenza amakoloni cishe kuwo wonke amagumbi omhlaba. Noma kunjalo, asikwazi ukukhohlwa ukuthi ngisho nathi sinemikhawulo yethu.
Ukweqisa kuyingozi kakhulu, futhi yibo kanye labo abazobusa impilo eMhlabeni ngaphandle kokuthi sikwazi ukumisa ukufudumala kwembulunga yonke. Ngokwesifundo esisha, ngo-2050 ukucindezela kokushisa kuzothinta abantu abayizigidi ezingama-350 ngaphezulu kwanamuhla.
Udokotela wesimo sezulu eLiverpool iJohn Moores University ogama lakhe linguTom Matthews, umbhali ophambili wocwaningo kanye nabanye asebenzisana nabo, uhlaziye ama- "megacity" anabantu abangu-44 kwabangu-101 emhlabeni, ngaleyo ndlela aveze lokho ukucindezela kokushisa kuphindwe kabili ngokushisa okungu-1,5 degrees Celsius.
Uma sibheka ukuthi izinga lokushisa eliphakathi komhlaba kulindeleke ukuthi lenyuke ngo-2ºC, ngaphezulu kwabantu abayizigidi ezingama-350 abengeziwe bazobhekana nengcindezi yokushisa ngonyaka ka-2050Ngoba njengoba iplanethi ifudumeza inani nokuqina kwamagagasi okushisa nawo azokwanda.
Ukufinyelela kulesi siphetho, abacwaningi basebenzise amamodeli wesimo sezulu futhi babheka ukuthi ukuqagela kwengcindezi yokushisa kungakuthinta kanjani ukushintsha kwezinga lokushisa. Ngakho-ke, bakwazi ukuphetha ngokuthi, yize ukufudumala kwembulunga yonke kungamiswa, amadolobha amakhulu aseKarachi (Pakistan) naseKolkata (India) angabhekana nezimo zaminyaka yonke ezifana nalezo abahlangabezana nazo ngo-2015, lapho ukushisa kubulala abantu abayi-1200 2000 ePakistan nabangaphezu kuka-XNUMX XNUMX eNdiya. Kodwa bekungeke kube yibo bodwa.
Omasipala abakhulu bomhlaba bangasongelwa kanzima njengoba baqukethe inani elikhulu le-asphalt, edonsa ukushisa okwenza izinga lokushisa enkabeni yedolobha libe phezulu kunezindawo zasemakhaya.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Ngo-2050, ukucindezela kokushisa kuzothinta abantu abengeziwe abayizigidi ezingama-350
Isimo sezulu ngo-2016 sephule amarekhodi amaningi